Nezvedu - Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
RuiYi inyanzvi yekutengesa uye inogadzira ndiro yealuminium alloy muChina uye isu zvakare tinobatirana nefekitari ine mukurumbira yealuminium ichiedza kuchengetedza mutengi wedu kubva munzvimbo dzakasiyana.Fekitori yedu yakavambwa muna 1997, iye zvino kambani ine vashandi vese vanopfuura mazana mana, kusanganisira vanopfuura mazana matatu nyanzvi dzehunyanzvi.
Mugadziri, Mumiriri, Mutengesi, Kambani Yekutengesa, Mutengesi
North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Eastern Asia, Southeast Asia, Middle East, Africa, Oceania, Pasirose
Kuve akanakisa One-Stop Solution kune Aluminium Metal Supply muChina.
Isu tinozvipira kupa pasi rose zvigadzirwa zveAluminium.Hapana chakakosha kwatiri kupfuura kugutsikana kwako kuzere musevhisi yedu uye chigadzirwa nemhando yakasarudzika, kukura kunoramba kuripo, mikana, uye hukama hunobatsira.
Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., Limited yanga ichitarisa pamusoro pemhando yepamusoro yealuminium alloy zvinhu mumakore gumi muChina.Takatanga sebasa diki, asi ikozvino tave mumwe wevanotungamira vatengesi muindasitiri yealuminium muChina.
Sarudza yedu yakakura yakakosha mukana
Yakakura inventory kuti uone kunaka
Kubva pakurongeka kwaiswa kune kunze kwekutumira, kuongororwa kwemhando mitatu kunoitwa kuona kuti chiyero chakakodzera chezvigadzirwa zvakapedzwa chiri pamusoro pe100%.Isu tine yakakura hesera, uye isu tinokwanisa kupa vatengi zvinhu zvakakwana kuitira kuti vatengi vasanetsekane nedambudziko rekubuda kwemasheya uye kushomeka kwemasheya.
Kuendesa panguva uye kuchengetedza mutengo
Isu tinovimbisa kuti mushure mekunge mutengi aisa odha, zvigadzirwa zvenzvimbo zvinotumirwa pazuva rimwe chete.Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. inopa nemoyo wese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuvatengi vemuno nevekunze, uye inopa vatengi zvigadzirwa zvinogutsa.
Isu tinovimbisa kuti kambani yedu ichatevera kurongeka kwese munguva kuti ive nechokwadi chekuti vatengi vanogona kugamuchira zvinhu zvakachengeteka, teerera kumaonero avo uye mazano nguva nenguva, uye kufunga nezvematambudziko edu.Rega vatengi vanzwe kurerukirwa.
Aluminium Alloys inochengetedza mhando yepamusoro yechigadzirwa mukati mese maitiro ekugadzira.Kubva pakuunzwa kweingot nejecha kusvika kune yekupedzisira dimensional cheki, kutarisisa kwakanyanya kunopihwa kune zvese zvigadzirwa sekutsanangurwa nemaitiro ekudzora mashiti pane chimwe nechimwe chinodiwa chekukanda.
Zvivakwa zvemhando yepamusoro zvinosanganisira misa spectrometry yekuongororwa kwesimbi, SPC yejecha kudzora, kuyedzwa kwemuviri, dhayi inopinda, x-ray, kuyedza kumanikidza uye yemagetsi dimensional yekutarisa.Iyo yakakura yekuchengeta rekodhi sisitimu inounganidza iyo data yekuteedzera kuzere.Mamiriro ehunyanzvi emakomputa ekugadzira ekugadzirisa zvirongwa zvinopa zuva nezuva kugadzirwa mamiriro ekugadzirisa anobvumira kuenderana panguva yekuendesa.
Aluminium Alloys inoenderera mberi nekuzvitsaurira kwayo kune hutano kuburikidza nehurongwa hunoenderera mberi hwezvivakwa uye kugadzirisa kwekugadzirisa kusangana nezvinodiwa nevatengi mune ramangwana, kunyanya mumashandisirwo akaoma.